download | Ugwu Ukwu, Ugwu Jizera, Paradaịs Bohemia
N'ọtụtụ kasị elu na njedebe nke oge okpomọkụ ememe a ọhụrụ version of n'ọtụtụ kasị elu Studio 22 na ọtụtụ innovations. Isi innovations agụnye n'ụzọ zuru ezu na-arụ ọrụ na n'ebe na agba Mpaghara, mma ọrụ edezi mgbe inserting mkpachị n'ime Mpaghara, Ndekọ ihe nke ihuenyo image na onyinyo nke webcam, mma agakọ mmetụta na ide Mpaghara video si multiple tracks ozugbo. N'ọtụtụ kasị elu Studio [...]
MP3 Celtic Music Download MPX - maka azụmahịa na nke na-abụghị nke azụmahịa. Zoo ya n'efu site na ịpị njikọ a. Ị nwere ike iji egwu egwu n'efu, dịka ọmụmaatụ, na vidiyo vidio YouTube gị, vidiyo nke onwe na nke azụmahịa, n'enweghị mmachi na enweghị isi. Debanye maka ọwa YouTube anyị ma nweta egwu ọhụrụ na vidiyo maka ọrụ gị [...]
Microsoft na-akwadebe nke ọma maka mmelite dị ukwuu na sistemụ arụmọrụ Windows 10. Ọ ga-eweta ọtụtụ nwelite na atụmatụ ọhụrụ na usoro. Ndị nnọchiteanya nke onye ọrụ nchịkọta data nke United States adịghị akwado ọchịchịrị nke akụkọ ahụ. Otú ọ dị, ọ nọ na-ekwu okwu ruo oge ụfọdụ na ọnụ ụzọ ámá na Microsoft ga-ahapụ mmelite ka ukwuu na ọkara mbụ nke afọ a. Akụkọ ga-abụ ọtụtụ ihe ọzọ, Microsoft bụ [...]
Far Arịrịọ Far Arịrịọ 5 5 bụ ihe na-abịa edinam fps oghe ụwa mepụtara studio Ubisoft Montreal na bipụtara Ubisoft maka Microsoft Windows nyiwe, 4 PlayStation, Xbox One na nkwado maka PlayStation 4 Pro, Xbox na Xbox One na One X. Ọ na-adịkarị Action isii nke usoro Far Arịrịọ. Hapụ nke egwuregwu bụ [...]